ခဲဖျက်ကလေးတစ်စင်းရဲ့ မီးကုန်​ယမ်းကုန်​အလွမ်းများ ~ မောင်သက်ဝေ
ဘွဲ့စာလုံးတွေက ကြီးနေတာလဲ ?
သြော် ... အင်း ... သူတို့က လူ,လူချင်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်တာမဟုတ်ပဲ
ပြက်လုံးတွေ ခပ်ပေါပေါ ထုတ်လို့ရလာအောင်ကိုး ။
လူနံပါတ်(၁၆၇၄)နဲ့ လူနံပါတ်(၃၂၅၅)တို့ အက္ခရာသတ်ပုံချင်းမှားသွား
ဆီးသည်းလှုပ် အခွံလွတ်သစ်သီးတစ်လုံးပြိုလဲကျ ။
မိုးရွာလာရင်တော့ သူမကိုယ်သူမ လွှင့်ပစ်လိုက်ဖို့
ရေဒီယိုက သတ္တိကြွပစ္စည်းတစ်ချို့နဲ့ သံစဉ်မဲ့သီချင်းကို
ကိုယ်လုံးတီး ထုတ်လွှင့်လာတယ် ။
ကျွန်မသားလေးကို မစားပါနဲ့တော့ အရှင်မျောက်မင်းရယ် ...
အခုလေးတင်ပဲ သူ့အဖေမျက်နှာကို မြင်ပြီးသွားပြီပဲဟာကို ။
ရေချိုးနေဆဲမိန်းမကို ခေါ်ပြရင်ကောင်းမလား ?
(ဟုတ်လို့လား ? သေချာလို့လား ?
ဟုတ်တာရော သေချာလို့လား ? )
ရေ ... ခဏ၊ခဏ ဆာလာတယ်တဲ့
(Ctrl+C > Ctrl+V )
မျက်ရည်တွေက မျက်လုံးထဲက အဆမတန်စီးကျနေတာ
အဲဒီ ... အာရှဘန်း(မ်) ပရုတ်ဆီဟာ တော်တော်ဆိုးတာပဲနော့် ... ကဗျာဆရာ ... ။
ဘာတွေများလဲလို့ ဟိုးအဝေးကြီးကတည်းက ငါလှမ်းကြည့်နေတာ
လတ်စသတ်တော့ ... မင်းတို့ကလူတွေပဲလို့
(တီဗွီထဲမှာ ပြောပါတယ် )
လက်ရှောင် ...! လက်ရှောင်ထားချည် ...
နင့်ခြေသည်းတွေ ညှပ်ထားလိုက်ပါ သရေခေတ္တရာ ။
မီးကျွမ်းလောင်ခြင်း မြင်းခွါသံဟာ မားမားမတ်မတ်ကြီးထွားလာပြီး
ငါနဲ့ ငါမမက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သံပရာပင်ကို ကော်ဖီအေးလုပ်သောက်တယ် ။
သားသမီးနဲ့ အခြေအရံ၊လာဘ်လာဘတွေ ပေါကြွယ်ဝပါစေ ။
ရင် ... ခုန် ... သံ ... ရယ် ...
သွား ... ခြေထောက်၊လက်ထောက်ပြီး
ခဏနေကျမှ ... အိမ်ရှေ့မီးရော၊နောက်ဖေးမီးပါ လင်းပေးမယ် ။
ငါ့မိန်းမက ခုတလော တော်တော်စားစားပဲဟ
သူမရဲ့ဘွဲ့လွန်စာတမ်းတွေကို သူများဆီပေးပစ်လိုက်တော့မယ် ။
တစ်ယောက်တည်း ဘီယာသွားစုပ်နေတော့မယ် ။
ခင်ဗျားရဲ့အုတ်နံရံက ပါးလျာလွန်းလှပါပေါ့ သမုဒယ
စာနာနာရိုက်ပြီး ဆက်သွယ်လာမယ်လို့ ထင်ထားသလဲ ?
အချိန်ကလေးအားတိုင်း လိင်ရည်လူးနေတတ်တဲ့ သူမနဲ့
သားကိုလက်ထပ်၊မင်္ဂလာဆောင်ပေးမတဲ့လား အမေ ...
အဲဒီမိန်းကလေးဟာ သားကိုလိင်ဇာတ်ထဲ ဆွဲသွင်းသွားတော့မယ်ဆိုတာ ... ။
နင့်ရုပ်က ဘာလို့အဲဒီလောက်ထိ ကဗျာရုပ်ပေါက်နေရတာလဲဟင် ...
ငါနဲ့ငါ့အစ်ကို ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့ စကားလုံးသစ်ဆန်းမှုတစ်ချို့
နင့်မျက်နှာပေါ် ... အချိန်မရွေး ... ပေါက်ဖွား ... ကြီးပြင်းလို့
သက် ... မွှေး ... ချို ... ရေ ... ။
မင်းကများင့ါကို သမားလိုသမားရ က္ကုတ္ထိကာဠုရယ် ...
မင့်တုန်းက မင်းအမေအရွယ်လောက် မိန်းမကြီးကိုယူထားခဲ့ပြီးတော့
မင်းသမီးအလှည့်ရောက်မှ မင်းအရွယ်လောက် ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်နဲ့
မပေးစားချင်ဘူးတဲ့လား ... သူငယ်ချင်းရာ ... ။
နေပါဦး ... ပဏ္ဍိသောမာဏရဲ့
ခခယယ ... တောင်းဆိုလာတတယ် ။
ယပ်တောင်တွေယပ် ... ပန်ကာကြီးတွေဖွင့်တော့
အင်းလျားကန်မြင်ကွင်းက ဒိဠိဆန်လာမှာ ။
ဟို ... “ဆွဲငင်အား”ကဗျာကိုရေးတဲ့ ကဗျာကယာလေးက
အရပ်မလောက်မငှပုတာနဲ့ ရုပ်ရေနည်းနည်းမက ဆိုးတာပဲရှိတာ.. ။
သံကွန်ချဂါထာနဲ့ အုပ်ချပစ်လိုက်တယ် ။
ရာသီဥတုပျက်တွေက လုယက်မက်စက်စွာ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြ ။
စုလျားရစ်ပတ် ရေခွက်ထဲရေစင်စက်ခြစားတာမျိုးတွေ လုပ်မနေကြတော့ပဲ
ငါ့မှာ နင်မရှိလို့မဖြစ်တော့ဘူး ။ ။
Posted in: လင်းထက်​​အောင်​ဧ။်​ကဗျာများ